Amnesty International oo ku baaqdey sii deynta dhammaan Maxaabiista ku xiran Yemen – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Amnesty International oo ku baaqdey sii deynta dhammaan Maxaabiista ku xiran Yemen
Amnesty International oo ku baaqdey sii deynta dhammaan Maxaabiista ku xiran Yemen
Amnesty International waxay ku baaqday siideynta dhammaan maxaabiista ku xiran Yemen iyo madixi dadkii la waayey
Baaqa Amnesty International ayaa ku soo beegmaysa ka dib furitaanka furitaankii ugu dambeeyay ee faylasha maxaabiista iyo af-duubyada, kuwaas oo dadaalladooda lagu beddelayo lagu joojiyay iyada oo la raacayo mabaadii’da ‘dhammaantood wax walba’.
Baaqa siideynta maxaabiista ayaa ku soo beegmaya xilli ay sii kordhayaan baaqa ka soo yeeraya ururada maxalliga ah ee xuquuqda aadanaha iyo kuwa caalamiga ah ee ku sugan Yemen in ay culeys dheeri ah saaraan maleeshiyaadka Xuuthiyiinta si loo sii daayo kumanaan maxaabiis ah oo sanado badan xabsi ku jiray.
Arrintan ayaa imaanaysa iyadoo ururka hooyooyinka la af-duubay ay sheegeen in maleeshiyada Xuutiyiinta ay sii wadaan afduubka ay u geysanayaan dadka rayidka ah ee ku nool aagagga ay ka taliyaan, iyagoo tilmaamay in dadka la afduubey lagu ciqaabayo jirdilna ay ku fulinayaan ciddii lagu waayey xabsiyada Houthi.
Ururka ayaa warbixin ay soo saareen ku sheegay in boqolaal rayid ah oo la afduubay lagu jirdilayo xabsiyada Houthi, qoysaskoodana lagu qaado lacago baad ah iyo mid nafsi ah, waxaana ay shaaca ka qaaday in maliishiyada ay qaar ka mid ah shacabka afduubka u geysteen maxaabiis dagaalyahanadooda ah.
Qoraalka ururku wuxuu xaqiijiyey in ilaa 189 kiis oo isweydaarsiga dadka rayidka ah ee afduubka lagu haystay lagu ilaalinayo maxaabiista Xuuthiyiinta ah ee lagu soo qabtay safka hore sanadii la soo dhaafay, iyo duruufaha ku xeeran dadka la siidaayay dadka rayidka ah ayaa lagu qasbay inay ka guuraan qoysaskooda aagagga ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadka si aan mar labaad loo afduubin.
Previous articleWasiirka waxbarashada Soomaaliya oo la kulmay la taliyaha Boqorka Sacuudiga
Next articleAmnesty International calls for the release of all detainees in Yemen